Sajhasabal.com |अब यात्रा गर्दा ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ !
फागुन १७, काठमाडौँ । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि परिचयपत्र अथवा कतिपय देशमा चर्चा र तयारीको अवस्थामा रहेको ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ को व्यवस्था समग्र विश्वले अवलम्बन गर्ला ?
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सर्वमान्य विधि तथा मापदण्ड नभए पनि केही देशले कोरानविरुद्ध खोप लगाएको प्रमाणपत्रको तयारी गरिसकेका छन् । डेनमार्क र स्विडेन भ्याक्सिन पासपोर्टको रुपमा चिनिने डिजिटल भ्याक्सिन सर्टिफिकेट प्रणाली सुरु गर्न अन्तिम तयारीमा छन् । खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक हुने देशमा यात्रा गर्दा तथा स्वेदशमै यात्रा गर्दा यो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।-आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।